कुकुरले खुला ठाउँमा से क्स गर्नुको कारण यस्तो पो रहेछ – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/कुकुरले खुला ठाउँमा से क्स गर्नुको कारण यस्तो पो रहेछ
के तपाईंले कहिल्यै कु कुरले स म्भोग गरिरहेको देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छैन भने पनि अब दसैं ताका यस्ता दृष्यहरु छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । अ सोज र कात्तिक महिनालाई कुकुरहरुका लागि बैं स चढ्ने वा स ह बास गर्ने महिना भनेर भनिन्छ ।
यो कहानी महाभारत युगदेखि प्रचलित छ । द्रौप दीको विवाह कसरी पाँ च भाइ पाण्डवसँग हुन गयो भनेर यसअघि नै प ढिसक्नु भएको छ । अब जान्नुहोस्, के का रणले कुकुर ज हाँसुकै सम्भोग गरिरहेका भेटिन्छन् भनेर ।
जब पाँच जना पतिमध्ये कुनै पनि भाइ द्रौपदीको श यन कक्षमा हुदा बाहिर ढोकामा खराउ छोडिएका हुन्थे । यसरी खराउ देखेपछि अर्को भाइ खोपिमा पस्दैन थिए । एक दिन माहिला भीम द्रौपदीको श यन कक्षमा विराजमान थिए । सदा झैं भीमले आफ्ना खराउ प्रवेश द्धारमै छोडेर भित्र द्रौपदीसँग प्रेमलि लामा मग्न भइरहेका बेला अचानक सा हिँला भाइ अर्जुन प्रवेश गर्न पुग्छन् ।
यो क्ष ण द्रौपदी, अर्जुन र भीम तीनै जनाको निम्ति श र्म नाक बन्न पुग्छ । यो कुरालाई लिएर भी म र अर्जुनबीच भ नाभन पनि हुन्छ । भीम महाभारतका अत्यन्त रिसा हा पात्र थिए । उनले अर्जुनसँग ख राउ राख्ने सर्तका बारेमा बहस गर्छन् तर अर्जुन बिन्ति गर्छन् ‘हे भ्रा ता श्री बाहिर हजुरका चरणआशन देखेको भए यस्तो अनर्थ हुने थिएन, क्ष मा चाहन्छु, परन्तू पादुका ढोकामा छैनन् ।’
पुरुषहरु पनि वे श्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन् । तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गोप्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । पुरुष यौ नक र्मी संग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पु रुष यौ नक र्मी विमल मगर ९नाम परिवर्तन०ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया“ बिषय नै नभएको बताए ।
‘यो कुनै नया“ कुरा नै होइन्’ उनले भने–‘हामिलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि रु’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनीहरुको सम्प र्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन् । कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौ न सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ ।
संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन् । ‘२ बर्षमा हालसम्म दुईरतीन सय युवतीहरुहरुसंग यौ न स म्प र्क राखेको छु’ विमलले भने–‘खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ ।’ कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए । ‘एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे–‘मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल–बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो ।’
यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो । कास्की प्रहरी प्रमुख एस।पि। शैलेश थापाले पुरुष यौ नक र्मी बारे केहि जानकारी नभएको र ठुलो समस्या पनि नभएको बताए । ‘यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको आएको छैन’ उनले थपे–‘खासै ठुलो समस्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छन महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउनुपर्ने
यस्ता औंला हुने महिला तथा युवतीहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी !